Tottenham oo albaabka u furtay heshiiska difaaca Man Utd ee Luke Shaw. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Tottenham oo albaabka u furtay heshiiska difaaca Man Utd ee Luke Shaw.
Posted by: radio himilo November 20, 2017
Muqdisho – Tababaraha kooxda Tottenham, Mauricio Pochettino ayaa doonaya in uu lasoo saxiixdo daafaca dambeedka bidix ee naadiga Manchester United, Luke Shaw bisha Janaayo, sida laga soo xigtay wargeyska Irish Independent.
Pochettino ayaa Shaw kula soo shaqeyey Southampton ka hor inta uusan difaacan u dhaqaaqin kooxda ka dhisan Old Trafford, waxaana uu daawaday dhawaan.
United ayaa xiiseyneysa inay Danny Rose kala soo wareegto Spurs, iyada oo daafaca dambeedka bidix uu ka danbeeyo mar la eego doorashada Pochettino laacibka lagu magaacabo Ben Davies, labadaas ayaana laga yaabaa inay kooxuhu ay kala badashaan bisha Janaayo.
Shaw waxaa waayahiisa Man Utd ragaadiyey dhaawacyo soo laalaabtay kuwaas oo u diiday in uu kooxda safkeeda koobaad kamid ahaado waqti xariir ah, waxaana la fahansan yahay in dhaawacyadaas ay ku keeneen in uu hilib fuulo, waana taas sababta uu u heli waayey dooqashada koobaad ee difaaca bidixe ee Manchester United.
Previous: Daniel Sturridge oo doonaya inuu ka baxo albaabka Anfield bisha Janaayo.
Next: 21 Nov – Maalinta Caalamiga ee Telefishanka.
Ragga Waraabaha la nool
Nashqadeeye af-saabyada la tuuro ka sameeya taajka aroosyada
La kulan: Hooyada 73 jirta ee baranaysa sida loo wado Baaskiilka